ပရိတ်သတ်ကိုယ်တိုင်မေးတဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဖြေတဲ့ မောင်မောင်ဇော်လတ် - အပိုင်း (၁) ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
ပရိတ်သတ်ကိုယ်တိုင်မေးတဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဖြေတဲ့ မောင်မောင်ဇော်လတ် - အပိုင်း (၁)
Scorpion Soup For Soul
ပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့ အတော့ကိုကြာသွားအောင် အောင့်အီးသည်းခံကြသူ အားလုံးကို တောင်းပန်ချင်တာပါပဲ။ ကိုဇော်လတ်နဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ ပူးပေါင်းစိတ်ကူးထားတာလေးက အစကတည်းက လက်ဝင်မယ်မှန်းသိပေမယ့် မေးမယ့်မေးခွန်းတွေဟာ မောင်မောင်ဇော်လတ်ရဲ့ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ မေးခွန်းစစ်စစ်ကြီးတွေ ဖြစ်ရင် တိုက်ရိုက်အကျိုးရှိမယ်လို့ ယုံကြည်လို့ ခင်များတို့ရဲ့ မေးခွန်းတွေကို တစုတစည်းတည်းဖြေဖို့အတွက် ဒါလေးကို အကောင်အထည်ဖော်ဖြစ်တာပါ။
အကြောင်းကြောင်းကြောင့် နောက်ကျရတာလေးကို ခွင့်လွှတ်နိုင်သလောက် ခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့။ အခုတင်ဆက်မယ့်အပိုင်းကတော့ မောင်မောင်ဇော်လတ်ဖြေပြီးသလောက်လေးပါပဲ။
မောင်မောင်ဇော်လတ် + ကိုဝီ
မှတ်ချက်။ ။ မေးသူရဲ့နာမည်ကို ကွင်းစကွင်းပိတ်လေးထဲမှာထည့်ထားပါတယ်။
ဖြေ - လိပ်ပြာလို နောက်ထပ်လုပ်ဖို့မရှိပါဘူး။
မေး (nov lu lu) - FM ရေဒီယို တွေမှာငွေကြေးကိစ္စတွေကြောင့် သူ့ရဲ့သီချင်းတွေနဲ့လင်းလင်းရဲ့သီချင်းတွေ ကိုရှောင်ကြတယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူငယ်တွေကြားမှာ သူတို့သီချင်းတွေမကြားရတော့ဘူး။ ကျနော်ဆိုရင်အရမ်းလွှင့်ပေးချင်တာ ခလေးတွေကိုမောင်မောင်ဇော်လတ်ဆို တာဒီလိုသီချင်းတွေကိုရေးတာ ဆိုတာလို့သိစေချင်တယ် အဲ့ဒါကို အကိုတို့ အဆင်ပြေသလိုမေးပေးစေချင်တယ်။
မေး (kaung myat kyaw) - ကိုမောင်မောင်ဇော်လတ် မြန်မာပြည်တစ်နေ့တာနှင့် သြဇီ တနေ့တာ ဖြတ်သန်းရပုံလေး (emotionအပိုင်းပေါ့) စိတ်ထဲရှိသလိုပြောပြပေးပါ။
လေးစားအားကျလျက် ကောင်းမြတ်သော် final part 2(UMMG)။
ဖြေ - သြဇီရဲ့ တနေ့တာကတော့ weekday မနက်သမီးကျောင်းပို့ပြီးရင် အလုပ်သွား ညနေအလုပ်ပြီးရင် အိမ်မှာ စာဖတ်ရုပ်ရှင်ကြည့် သီချင်းနားထောင်ပါတယ်။ weekend ကတော့ အပင်စိုက်ဈေးဝယ် အိမ်သန့်ရှင်းရေးလုပ် စိတ်ပါရင်တော့ ဘယ်နေ့ဖြစ်ဖြစ်ဂီတာတီးပါတယ် ။ မြန်မာပြည်မှာလိုတော့ relax မဖြစ်ပါဘူး။
မေး (zarn linneain) - ဆရာသမားကို "အမြဲတမ်း." လို သီချင်းမျိုး ထပ်ထွက်ဖို့ ရှိ/မရှိ , အဲ့ဒီလို သီချင်းအမျောတွေ အခုရေးဖြစ်/မဖြစ် မေးပေးပါဗျာ respect The Ants,Mg Mg Zaw Latt (El Phyu,Aung Khant)
မေး (gangyi) - ကိုဇော်လတ်ကိုမေးပေးပါ။ ၁၉၉၀ local Alternative band တွေ စခဲ့တုန်းက ရဲဘော်ရဲဘက်တွေနဲ့ ပေါင်းပြီး အခုချိန်မှာ Alterတွေသေနေတဲ့ ဂီတပုံစံ နှစ်မျိုးသုံးမျိုးသာလျှင်ဈေးကွက်ဝင်နေတဲ့ဂီတလို့ထင်နေတဲ့ မြန်မာ့ ဂီတရေစီးကို မလှုပ်နိုးချင်ဘူးလားလို့ တချို့လဲ JAM IT မှာ ပြန်လည် လှုပ်ရှားလာကြတာတွေ့လို့ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဖြေ - မြန်မာပြည်ဂီတလောကထဲမှာ မရှိတာ နှစ်ပေါင်းတော်တော်ကြာသွားပါပြီ ။နောက်လူငယ်မျိုးဆက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်၊ တော်ကြပါတယ် အခုလည်းသူတို့တွေထိုးဖေါက်အောင်မြင်ကြပါတယ်။ ရေစီးကြောင်းကတော့ အနုပညာတစ်ခုထဲမဟုတ်ပါဘူး နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး ပညာရေး လူနေမှု့အဆင့်အတန်း အားလုံးနဲ့ ဆိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။
မေး (kaung htet naing) - သီချင်းတစ်ပုဒ်ရေးဖို့အတွက်ကုန်ကြမ်းဘယ်လိုရှာရတာလဲခဗျာပြီးတော့အရင်ဆုံးဘာတွေကိုလေ့လာရပါသလဲ ကိုမောင်မောင်ဇော်လတ်ခင်မျာ။
မေး (zaw bob zaw) - ကိုဇော်လတ်တို့ရဲ့ THE ANTS ကွယ်လွန်မင်ဘာတွေအတွက် အမှတ်တရ SHOW နဲ့ ကိုဇော်လတ်ရဲ့ SOLO SHOW မျိုးပေါ့ (LIVE 90ပဲဖြစ်ဖြစ်) ကို လုပ်ဖြစ်ဖို့အတွေးလေးတွေများရှိမလား။ ရှိထားပြီလား။ သိခွင့်ရချင်ပါတယ်။ စောင့်မျှော်နေသူတွေအတွက်ပါ။ နောက်ပြီး သြဇီမှာနေလာတဲ့တလျှောက်ပေါ့လေ... မြန်မာပြည်မှာဂီတလုပ်ကြတဲ့ လူငယ်တွေနဲ့ ( လူငယ်တွေကိုပြောတာနော် ဆိုလိုတာက အောင်မြင်ချင်မှအောင်မြင်မယ် စူးနစ်မှုတွေနဲ့တရူးတသွပ်ကြီးလုပ်နေကြတဲ့လူငယ်တွေကိုပြောတာပါခင်ဗျ ) နဲ့ သြဇီက ဂီတလူငယ်တွေပေါ်မှာ မြင်မိမယ့် ကိုဇော်လတ်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တွေးဆ ထင်မြင်မှုလေးသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။
မေး (soe lin latf) - ကိုအယ်ဖြူကြီး ဆုံးပြီးနောက် အချိန်အတိုင်းအတာ အတော်ကြာကြာ ကိုအောင်ခန့် ကြီးရှိနေပါသေးတယ် ။ မေးချင်တာက ကို mmzl နဲ့ ကိုအောင်ခန့် close သိပ်မဖြစ်သလိုပဲ ။ ကို mmzl က ကိုအောင်ခန့်နဲ့ ဘာလို့ ဆက်မလျှောက်တော့တာလဲ ။ ကျွန်တော်တို့ တဆင့်စကားနဲ့ ကြားဖူးတာကတော့ ကို mmzl က အယ်ဖြူကိုချစ်ပီး အောင်ခန့် အပေါ် သိပ်ဘဝင်မကျဘူးလို့ ကြားဘူးတယ် ။ W H Y ? ဖြေနိုင်မည့်မေးခွန်းဆိုရင်တော့ အမှန်အတိုင်းဖြေစေချင်ပါတယ် ။ The ants is my fav band.။
ဖြေ - အောင်ခန့်ကို the ants စဖွဲ့တော့ ကျွန်တော်ခေါ်ခဲ့တာပါ ။ ညီအကိုတွေလိုပဲ ခင်ပါတယ် ပိုပြီးခင်တယ် မခင်တယ် ချစ်တယ် မချစ်တယ် မရှိပါဘူး ။ အယ်ဖြူမရှိတဲ့နောက် the ants ကို ဆက်မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူး ပဒုတ ကိုသာလုပ်လက်စမို့ အချောသတ်ခဲ့တာပါ။ အောင်ခန့်နဲ့လဲ ဘာပြဿနာမှ မရှိခဲ့ပါဘူး သို့သော် သူနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ထဲနဲ့လဲ the ants ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး ဒါ့ကြောင့်ဆက်မလုပ်ဖြစ်တာပါ။
မေး (pyae phyo aung ) - ကိုဇော်လတ် မင်္ဂလာပါ ၊ အရင် ကိုလေးဖြူ နဲ့ ကိုမျိုးကြီး နှစ်ယောက်အကြောင်း ကိုဇော်လတ်ရေးတာ ဖတ်ဘူးပါတယ်၊ အဲလိုမျိုးပဲ ကိုဇော်လတ်နဲ့အရင်းနှီးဆုံး ဖြစ်ခဲ့ ဘူးတဲ့ကိုထူးအိမ်သင်နဲ့ ကိုအယ်ဖြူ အကြောင်းလေးလဲ ဖြစ်နိုင်ရင် ဖတ်ချင်ပါတယ် နောက်ပြီး ကိုဇော်လတ် ရေးထားတဲ့သီချင်းတွေ ဒီနှစ်ထဲမှာ ထွက်လာဖို့ ရှိမရှိပါ ၊ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဖြေ - ကျွန်တော်သီချင်းတပုဒ်တော့ အဆင်သင့် mix လုပ်ထားပြီးသားရှိပါတယ်။ ဘယ်တော့ထုတ်ဖြစ်မယ်တော့မသိသေးပါ။
မေး (than htut oo) - MMZL ရဲ့ နောက်ပိုင်းကြိုက်လာတဲ့ ဂီတပုံစံအရ သူ RETRO ROCK တွေ ဖန်တီးတော့မယ်လို့ ပြောဖူးပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး ဖန်တီးဖြစ်ပါသလား သိချင်ပါတယ်။
ဖြေ - ကျေးဇူးပါ။ သီချင်းများများနားထောင်ပါ လိုက်တီးကြည့်ပါ စာသားတွေ လေ့လာပါ ဖတ်ပါ ခွဲခြားစိတ်ဖြာပါ အတုယူပါ ပြီးရင်လိုက်ရေးကြည့်ပါ ကိုယ်ပိုင်ဟန်ရအောင်လုပ်ပါ။ ဒါကတော့ ကျွန်တော်လုပ်တာပါ။ အနောက်တိုင်း အရှေ့တိုင်းသီးချင်းအားလုံးလေ့လာပါ။
မေး (aung thet naing soe) - နိုင်ငံရပ်ခြားမှာနေပေမယ့် သူ(MMZL) မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားတဲ့ ဂီတကို ဖန်တီးဖို့ ရင်ဘတ်ကြီးထဲမှာ ပြည့်နှက်နေမယ်ဆိုတာ အကြွင်းမဲ့ယုံကြည်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ အနေနဲ့ သူ့ရဲ့  ဂီတပုံစံအသစ်သစ်တွေကို နှလုံးသားနဲ့ ခံစားပြီးစားသုံးခွင့်ရဦးမလားဆိုတာလေးသိပါရစေ။